गायिका अन्जु पन्तले गाइन् मौलिक रोइला गीत !(भिडियो सहित) | Sindhuli Saugat
गायिका अन्जु पन्तले गाइन् मौलिक रोइला गीत !(भिडियो सहित)
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ चैत ३ गते शनिवार काठमाडौं
नेपाली सुगम संगीतमा र पाश्र्व गायनमा स्थापित बनेकी सुमधुर स्वरकी धनि गायिका अन्जु पन्तले पछिल्लो रोइला गीत गाएकी छिन् । गायक रोशन गैरेको साथमा अन्जुले सुमधुर आवाज भरेको रोइला गीत ‘हाम्रा बा लाई थर्काउ’ सार्वजनिक भएको छ ।
रशिका डिजिटलको प्रस्तुतिमा सार्वजनिक भएको गीतमा माया प्रेमको जुहारी समेटिएको छ । युवायुवतिको प्रेम कथालाई गीतमा समेटिएको छ । निकै राम्रो रोइला गीतलाई आम दर्शक तथा श्रोताले अधिक मात्रा मन पराउने अपेक्षा लिएको गायिका अन्जुले बताइन ।
मौलिक र उत्कृष्ट रोइला गीत ल्याएको भन्दै आम दर्शक तथा श्रोताबाट राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । गीतको लय शब्द र गायन जति उत्कृष्ट बनेको छ, त्यतिनै उत्कृष्ट भिडियो बनेको छ । रोशन गैरेको उत्कृष्ट शब्द सिर्जना तथा संगीतमा बनेको गितमा करिष्मा ढकाल र रोशन गौरेको अभिनय रहेकोे छ ।
काजिश श्रेष्ठको निर्देशन रहेको उक्त गीतको छायांकन भने सागर गौत्तमले गरेका हुन् । रोशन गैरे आफैले सम्पादन गरेको भिडियोलाई म्युजिक नेपालकै युटुब चयानलमा अपलोड गरिएको छ ।
पछिल्लाे - सिन्धुलीमा करिब ६ हजार परिक्षार्थी सहभागि हुने
अघिल्लाे - नयाँ सरकार बनेपछि कहाँ हरायो हजार र पाँच सयका नोट ?